Soo dejisan Beach Buggy Racing 1.2.11 – Vessoft
Soo dejisan Beach Buggy Racing
Beach buggy Racing – ciyaar qaab ciyaareedka tartanka firfircoon ee buggy xawaaraha. Ciyaaryahan waxa uu leeyahay si aan ula tartano dirawalada kale ee waddooyinka picturesque ee hababka kala duwan oo isku dayaan in ay ku dhameysan ugu horeysay si aad u hesho tirada ugu badan ee lacagta birta ah iyo xiddigaha. In Beach buggy Racing waxaa jira gunooyin kala duwan si ay u dardar, weerari soo horjeeda ay hub ah, ku rid siriqda kala duwan, waxaana ka luma kontaroolka iwm ayaa lagu daydo cusub ee baabuurta iyo darawalada la xirfadaha gaarka ah waxaa la furay ciyaaryahanka ka dib markii taxane kasta maray ee tartamada ee horyaalka. Beach buggy Racing awood u reserved qaabab kala duwan oo ay gacanta ku xidhi joysticks ay ku ciyaaraan saaxiibada.
Kala duwan oo ka mid ah kuwan raadkaygay tartanka
Bedelaada Baabuurka iyo Driver
Wax Iibsiga ee gunooyin kala duwan
Taageerada qaabab kala duwan oo ay gacanta
Comments on Beach Buggy Racing:
Beach Buggy Racing Software la xiriira:
English, Français, Español, Deutsch... Agar.io 1.3.1
العربية, English, Українська, Français... Steam 2.0.32
العربية, English, Українська, Français... SpeedX 3D 1.96
Games Ciyaarta ayaa u drive xawaaraha oo laga adkaado caqabadaha kala duwan ee track 3D. Kulankaan ayaa wuxuu isticmaalaa saamaynta midabo iyo sawiro 3D wanaagsan.
العربية, English, Українська, Français... Hay Day 1.29.98
العربية, English, Français, Español... Hearthstone 3.0.9791
العربية, English, Українська, Français... WinZip 3.3
Files Tababaraha file waxaa ka mid ah qalab badan oo maamulka xogta ku ool ah qalabka. Software wuxuu taageeraa oo dhan hawlgallada file ugu weyn ee xogta systemic iyo waxa la qariyey.
English, Українська, Français, Español... Microsoft PowerPoint 16.0.6131.1008
Files Tool in ay la shaqeeyaan kaydinta daruur. Barnaamijku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si loo badbaadiyo files kala duwan si ay kaydinta daruurtii oo aannu siinno inay faylasha bixi helaan guud.